चीन र भारतका सै’निकबीच फेरि त’नाव, सीमामा भयो दोहोरो फा’यरिङ, अब के होला ? – Rapti Khabar
चीन र भारतका सै’निकबीच फेरि त’नाव, सीमामा भयो दोहोरो फा’यरिङ, अब के होला ?
काठमाडौं, भदौ २३ चीन र भारतका सै’निकबीच फेरि भिड’न्तको खतरा बढेको छ। सोमबार सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा दुई देशका सै’निकबीच दो’होरो फाय’रिङ भएको हो।
दुवै देशका सै’निकले एकअर्कालाई पहिले फा’यरिङ गरेको आरोप लगाएका छन्।
चिनियाँ सैनि’कले भारतीय सै’निकले पहिले वास्तविक सीमा रेखा पार गर्दै ध’म्की स्व’रूप फाय’रिङ गरेको आरोप लगाएको छ।
चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले चिनियाँ सेनाका प्रवक्ताको भनाइ उधृत गर्दै भनेको छ, ‘स्थिति निय’न्त्रणमा लिन चिनियाँ सेना पनि प्रति’कार (फा’यरिङ) गर्न बाध्य भयो।’
भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआईले पनि पूर्वी लद्दाखमा फाय’रिङ भएको उल्लेख गरेको छ।
कतिपय मिडियालेले भने पहिले चिनियाँ सैनि’कले फाय’रिङ गरेपछि भारतीय सैनि’क त्यसको जवाफ दिन बाध्य हुनुपरेको दाबी गरेका छन्।
यसअघि केही दिनअघि मात्र दुई देशका सै’निकबीच ‘झ’डप भएको थियो। तर यस क्रममा के कति हताहती भयाे भन्नेबारे दुवै देशले अहिलेसम्म केही बताएका छैनन्।
गत जुन १५ मा पनि हति’यारहित भिडन्त हुँदा २० भारतीय सै’निक मारिएका थिए। त्यसपछि दुई देशका सैनिकबीच पटप’टक वार्ता गरी सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने सहमति भए पनि पुनः तना’व सुरु भएको हो।
विशेष कुरा- सन् १९७५ पछि सीमामा भारत र चीनका सैनिकबीच याे पहिलाेपटक फा’यरिङ भएकाे भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
संयुक्तराज्य अमेरिका र रसियालाई उछिन्दै चीनले देखायो अर्को चमत्कार
चीनले विकास गरेको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अन्तरिक्ष यान दुई दिनसम्म अन्तरिक्ष कक्षमा रहेर आइतबार सफलतापूर्वक पृथ्वीमा अवतरण गरेको छ । अन्तरिक्ष यात्रालाई सस्तो बनाउने सन्दर्भमा यो एउटा महत्वपूर्ण पाइला भएको चीन सरकारले घोषणा गरेको छ ।
उक्त यान गत शुक्रबार जिक्वान भूउपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो । तर गोप्य रुपमा विकास गरिएको यस अभियानका बारेमा विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
चीनको सरकारी समाचार समाचार संस्था सिन्ह्वाले एक अधिकारीको भनाई उद्धृत गर्दै उक्त यान जिक्वान अन्तरिक्ष केन्द्रमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको जनाएको छ । तर यानको तस्वीर भने प्रकाशन गरिएको छैन, न त यानको आकार र प्रकारका बारेमा नै केही बताइएको छ ।
सिन्ह्वाले यस अभियानको सफलताले चीनको अन्तरिक्ष यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हासिल भएको जनाएको छ । चीनले यसअघि सन् २००३ मा पहिलो पटक अन्तरिक्षमा एक व्यक्तिलाई पठाएको थियो । गत वर्ष चीनले चन्द्रमाको सबैभन्दा टाढाको स्थानमा रोभर रोबोट अवतरण गराएको थियो ।
अर्को यस्तै खोज रोबोट अहिले मंगलग्रहमा पठाइएको छ । संयुक्तराज्य अमेरिका र रसिया दुई मुलुकले मात्र हालसम्म पुनः प्रयोग योग्य अन्तरिक्ष यान निर्माण गर्ने सफलता प्राप्त गरेका छन् ।
‘भारतले चीनसँग गडबडी गरे भारी मूल्य चुकाउनुपर्छ’
चिनियाँ सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले भारतले चीनसँग गडबडी गरे भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । भारतसँग चलिरहेको सीमा विवाद र पछिल्लो परिस्थितिसँग जोडेर एक विश्लेषणात्मक लेखमार्फत सो अखबारले उक्त चेतावनी दिएको हो । ग्लोबल टाइम्स चीन सरकारको मुखपत्र समेत हो ।
सो लेखमा भारतले चीनसँग संघर्ष जारी राखे त्यसको मूल्य महंगो पर्ने जनाइएको छ । ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ– ‘वास्तविक नियन्त्रण रेखा(एलएसी) क्षेत्र वरिपरि ठूलो संख्यामा सेना खटाउँदा पनि भारतले निकै मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । अहिले त्यहाँ भारतीय सेनाका लागि हरेक दिन हतियार र सामानको आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले पनि आर्थिक भार बढ्ने र त्यसले समेत प्रतिकूल असर पर्नेछ । त्यस्तै जाडोको समयमा समेत सेनाको लागत बढ्ने भएकोले भारतका लागि त्यो प्रतिकूल हुनेछ ।’
सोही परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अखबारले लेखेको छः ‘सैन्य आपूर्तिको भारी भरकम लागत देख्दा भारतले त्यस्तो आक्रामक मनोवृति देखाउनु बेकार छ । चीनसँगको द्वन्द्वले भारतको वैदेशिक सहयोगलाई मात्र हानी गर्दैन, औधोगिक आपूर्तिको श्रृंखलामा समेत असर पर्नेछ । यसले भारतीय बजारप्रतिको भरोसालाई कमजोर पार्छ र लगानी व्यापार टाढा पुग्नेछ ।
भारतले युद्धको छायाँको आर्थिक प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर मूल्याङकन गर्न समेत तयार हुनुपर्छ ।’ टाइम्सले लेखेको छ– ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो वर्ष निकै दबाबमा छन्, किनभने यो आर्थिक वर्षमा भारतमा जीडीपी १० प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैले अहिले भारत र विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरुले यसको अनुमान गरिरहेका छन् । लाखौं भारतीय नागरिकहरुले रोजगारी गुमाउने र रोजगारी नपाउँदा लाखौं भारतीय गरिबीको अन्धकारमा डुब्नेवाला छन् ।’
अखबारले लेखेको छ– ‘मोदीको २०२४ को तेश्रो कार्यकाल निकै धमिलो हुँदै गइरहेको छ, किनकी सबै भारतीय व्यावसाय र रोजागरी स्थाई रुपमा मर्दैछन् । यसका साथै कोभिड महामारीले पनि तिब्र रुपमा स्वास्थ्य संकट टर्ने आशालाई धुमिल पारिरहेको छ ।’ ग्लोबल टाइम्सले भारतीय तथ्यांक तथा सूचना मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै लेखेको छः ‘दोश्रो त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्माण क्षेत्रमा ५० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ३९ प्रतिशत र खानी क्षेत्रमा २३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । देशव्यापी लकडाउनका कारण डाटाको गुणस्तरमा समेत असर परेको हुनसक्छ । धेरै अर्थशास्त्रीहरुले भन्न थालेका छन् कि आउँदो समयमा भारतमा परिस्थिति झनै नराम्रो हुनेछ ।’
सो अखबारले लेखेको छ– ‘यद्यपि, त्यहाँ जुलाई र अगष्टमा सुरु भएका आर्थिक गतिविधिका केही संकेतहरुले रिकभर हुन सक्षम हुने देखाएको छ । तर यो संकेतमाथि पनि निकै सन्देह छ किनभने भारत कोरोना भाइरस महामारीको नयाँ केन्द्र बन्न लागिरहेको छ । त्यहाँ अहिले प्रतिदिन ६० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरु देखिइरहेका छन् ।’
त्यस्तै भारतीय अर्थतन्त्र भारी मात्रामा घरेलु खपत र निर्यातमा निर्भर रहेको जनाउँदै अखबारले कोरोना महामारीका कारण अधिकांश भारतीयहरुको आम्दानी घटेको दाबी गरेको छ । अखबारले लेखेको छ– ‘धेरै मानिसहरुले आफ्नो जागिर गुमाइरहेका छन्, त्यसैले उनीहरुको खरिद शक्ति पनि घटेको छ भने विदेशमा भारतीय वस्तु र सेवाको मागमा पनि गिरावट आएको छ ।’ यस्तो परिस्थितिमा भारतले अझै जटिलता थप्न मूर्खतापूर्वक चीनसँग सीमा विवाद सृजना गरेको दाबी गरिएको छ ।
टाइम्सले लेखेको छः ‘भारतीय सिपाहीहरु एलएसी पार गर्दै चीनको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिरहेका छन् । भारतको दुर्व्यवहारले द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बिगारेको छ । यसले भारतमा हुने चिनियाँ लगानीको पनि अन्त्य गर्नेछ ।
प्रभावशाली अलिबाबा समूहले त भारतमा गर्ने सबै लगानी रोकिसकेको छ ।’ १५ जुनको सीमा विवादपछि मोदी सरकारले क्रमसः चिनिया एप्सहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गर्दै भारतको यस्तो कदमले आर्थिक सहयोगमा क्षति पुर्याएको अखबारको दाबी छ ।
लेखमा भनिएको छ– ‘कोरोना भाइरसँगको लडाईमा हारिरहेको भारत चीनसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्दैछ, जसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्थामा अर्को ठूलो धकका लाग्ने निश्चित छ । त्यतिमात्र होइन सीमा विवादका कारण भारतीय सामानका लागि चीनको ठूलो बजार समेत बन्द हुनेछ ।’ अखबारले चीनको आर्थिक शक्तिको विषयमा भने ठूलो वर्णन गरेको छ ।
टाइम्सले लेखेको छ– ‘दुई ठुला देशबीचको भू–आर्थिक परिवेशमा भारतले चालेको यो कदम निकै मूर्खतापूर्ण रहेको छ । यसले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदैन र बनाइरहेको छैन । चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा पाँच गुणा ठूलो छ र तिब्र रुपमा उदाइरहेको छ ।
चीनको छिमेकी देश भएकोले एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको पक्षमा खडा नहुनु भारतको मुख्र्याइँ मात्र हो ।’ केही साल पहिले १.३ अरब जनसंख्या भएको भारतको अर्थव्यवस्थामा तिव्र गतिमा आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तर सन् २०१७ पछि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको देखिएको टाइम्सको विश्लेषण छ ।
टाइम्सले लेखेको छः ‘ भारतमा पछिल्लो वर्ष अगष्ट महिनामा कार बिक्रीमा ३३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ, जुन पछिल्लो २ दशककै सबैभन्दा धेरै गिरावट हो । अहिले भारतमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा छ, यदि स्वास्थ्य संकट सन् २०२१ सम्म रह्यो भने निकै ठूलो आर्थिक मन्दीमा भारत फस्दैछ ।
त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निकै चूनौतीको सामना गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चीनसँगको संघर्ष उनका लागि निकै महङ्गो सावित हुनसक्छ ।
चार महिनापछि पहिलोपटक भारत र चीनको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच वार्ता
भारत र चीनबीचको सीमा विवाद सुरु भएको ४ महिनापछि पहिलोपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफल भएको छ । रुस भ्रमणमा रहेका दुई देशका रक्षामन्त्रीबीच शुक्रबार राती वार्ता भएको हो । सो भेटवार्ता झण्डै ४ महिनायता पूर्वी लद्दाखस्थित नियन्त्रण रेखा वरिपरि भएको २ देशका सेनाबीचको तनाव हटाउनमा केन्द्रीत रहेको जनाइएको छ ।
भारतीय मिडियाहरुका अनुसार मस्कोमा रहेका भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र चिनियाँ रक्षामन्त्री विई फिङबीच सीमा विवाद समस्या समाधानमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको छ । सुरुमा चीनले वार्ताको प्रस्ताव राखिएको बताइएपनि वार्ताको वातावरण कसरी बन्यो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छैन । दुबै देशका रक्षामन्त्री अहिले संघाई सहयोग संगठन(एससीओ) को बैठकमा भाग लिन मस्को भ्रमणमा रहेका छन् ।
पछिल्ला दिन ३० र ३१ अगष्टमा लद्दाखमा २ देशका सेनाबीच थप तनाव चर्किएको थियो । त्यसयता २ देशका सैनिक कमाण्डरहरुबीच पनि लगातार वार्ता भैरहेको छ । शुक्रबार पनि दुई पक्षका सैनिक कमाण्डरहरुबीच ३ घण्टा वार्ता भएको थियो । केही महिनाअघि लद्दाखमै भएको दुई पक्षीय झडपमा परेर थुप्रै भारतीय सेना मारिएका थिए ।
Posted on September 3, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ १८, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज पहेलो धातु सुनको मूल्यमा प्रतितोला रु ७०० ले कमी आएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन आज बुधबारको तुलनामा रु ७०० ले कमी आई रु ९६ हजार ५०० मा कारोवार भएको छ । बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ९७ हजार २०० मा कारोवार भएको […]
आज २०७७ कात्तिक १४ गते शुक्रबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
Posted on October 29, 2020 Author Rapti Khabar
मेष मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ। विशेष अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। भाग्यले विभिन्न अवसर थमाउनेछ। अध्यात्मभाव जागृत हुनाले परोपकारमा मन जानेछ। धेरैले कामको तारिफ गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चुनौती समाप्त होला। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। बृष नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने मनग्य धन आर्जन हुनेछ। […]
साउदीमा काम गर्ने बिदेशी श्रमिकलाई खुसीको खबर
Posted on October 30, 2020 Author Rapti Khabar
कात्तिक १४, काठमाडौँ — साउदी अरबको रियादमा १० वर्षदेखि काम गर्दै आएका पर्साका उमेश पासवानले बुधबार सूचना पाए– साउदी सरकारले कफला प्रणाली हटाउँदै छ । यो उनले नसोचेको सूचना थियो । ‘अब आफ्नो क्षमताअनुसार स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाइने भयो,’ उनले भने । यो खबर होम कार्कीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । माल अनलाइन बिजनेस दैनिकले २०२१ को मध्यबाट […]
मौसममा देखिन थायो यस्तो परिवर्तन, अब बर्षात कहिलेसम्म रहन्छ ?
भारतविरुद्ध फेरि भड्कियो चीन, दियो कडा चेतावनी